Izindaba - E-China: Kungani Ukuvuselelwa Kwe-Visa Yami Kwanqatshelwa?
Phezu kwalezi zindaba ezikhathazayo, ngoJulayi, ihhovisi lezindaba zangaphandle esifundazweni saseGuangdong libukeka liyiqinise imithetho mayelana nesicelo semvume yokusebenza.Lokhu kungaba yisithiyo esikhulu ezinkampanini eziqalayo, njengoba ukuthola imvume yokusebenza ngokuvamile kuyisinyathelo sokuqala sokuthumela abasebenzi eChina.
Abanye abafake izicelo zemvume yokusebenza okokuqala ngqa manje sebecelwa ukuthi banikeze izinto zokwakha ezengeziwe ezingakaze zicelwe ngaphambili, okuhlanganisa (ngokwenkomba yakho evamile):
1. Inkontileka yokuqashisa yehhovisi lenkampani
2. Isethulo sokusebenza kwesiteji samanje senkampani
3. Ubufakazi obukhombisa isidingo, ukuphuthuma, kanye nokubaluleka kokuqasha abantu bangaphandle.
4. Xhumana namakhasimende/nabathengisi
5. Ishidi lokuthekelisa ngokwezifiso
Ngokubona kwethu, inhloso yokuqinisa imithetho yezicelo zezimvume zokusebenza iwukuqinisekisa ukuthi abafake izicelo banesidingo sangempela sokusebenza eShayina, hhayi ngenxa yezinye izizathu ezingahlobene.Lokhu kungenxa yokuthi ngalesi sikhathi sodlame, abanye abantu bakwamanye amazwe basungula izinkampani eChina okubukeka sengathi zitholele i-visa yokusebenza kuphela.
Kusukela kokuhlangenwe nakho kwethu kwakamuva, uma kuqhathaniswa nezinye izikhundla eziphezulu, kubonakala sengathi ummeleli wenkampani osemthethweni udinga amadokhumenti ambalwa asekelayo ukuze athole imvume.
Isizathu yingoba omele inkampani yaseShayina kuzodingeka abonakale ngokoqobo ezinqubweni ezithile ezihlobene nenkampani, njengokuya ebhange ukuyovula i-akhawunti yasebhange eyisisekelo, ukumisa i-akhawunti yentela yenkampani esikhungweni sentela, kanye nokugcwalisa ukuhlolwa kokuqinisekisa kwegama langempela.
Nokho, ummeleli wezomthetho manje udinga ukusayina inkontileka yabasebenzi, esikhundleni sokuvele alayishe ilayisense yebhizinisi.Futhi, ummeleli wezomthetho kumele abe nohlobo oluthile lwesihloko somsebenzi enkampanini.
Isandiso se-Hangzhou-Visa Cishe Sizokwenqatshwa Uma…
Ngokwenqubomgomo yakamuva yokwelulwa kwama-visa evela eHhovisi Lezokufika lase-Hangzhou, abafundi abanalezi zimo ezilandelayo kungenzeka banqatshelwe ukwandiswa kwama-visa eHhovisi Lezokufika lase-Hangzhou.
1.Abafake izicelo abane-visa yokuhlala engaphezu kweyodwa (T visa).
2.Abafake izicelo abane-visa yebhizinisi, i-visa yokusebenza noma ezinye izinhlobo ze-visa yokusebenza.
3.Abafake izicelo abaneminyaka engaphezu kwemi-5 isipiliyoni sokufunda eChina.
4.Abafake izicelo abaneminyaka engaphezu kwengu-7 i-bachelor kanye nolwazi lolimi e-China.
5.Abafake izicelo abanolwazi lokufunda ulimi lwezikole eziningi eShayina.
6.Abasha bohlelo lwe-bachelor abaneminyaka engaphezu kwengama-35 ubudala.
7.Abenzi bezicelo abangenazo izincwadi zokudlulisa ezinemininingwane enemininingwane yokusebenza kocwaningo ezivela emanyuvesi adlule.
8.Abafake izicelo abaneziqu ze-bachelor/masters bafaka isicelo se-visa futhi egameni labafundi bolimi.
9.Abafake izicelo abanolwazi lokufunda ulimi lweminyaka emi-2 bafaka isicelo se-visa futhi egameni labafundi bolimi.
10.Abafake izicelo abanombiko wokuhlolwa kwezempilo okungafanelekile.
Sikukhumbuza ngomusa ngezimo ezishiwo ngenhla ezingaholela ekunqatshweni kwe-visa.Sicela uqaphele inqubomgomo ye-visa yakamuva futhi ulungiselele ngokufanele.
Ukuvuselelwa Kwemvume Yokusebenza yase-Shanghai-China kusisekelo esikude
Ukusiza abakwamanye amazwe abavaleleke phesheya kwezilwandle ekuvuseleleni izimvume zabo zokusebenza zaseShayina, amahhovisi amaningi endawo angaphandle akhiphe inqubomgomo yesikhashana.Isibonelo, ngomhla ka-Feb 1, i-Shanghai Administration of Foreign Experts Affairs imemezele Isaziso sokusetshenziswa kokuhlolwa "kokungavakashelwa" nokugunyazwa kwazo zonke izindaba ezihlobene nemvume yokusebenza yabantu bangaphandle e-Shanghai.
Ngokwalo mgomo, abafake izicelo zokuvuselela izimvume zokusebenza bebengasadingeki ukuthi balethe amaphepha okuqala ezicelo ehhovisi lezangaphandle eChina.Esikhundleni salokho, ngokuzibophezela ngobuqiniso bamadokhumenti, abafake izicelo bangavuselela izimvume zabo zokusebenza bekude.
Le nqubomgomo engenhla isisize kakhulu inqubo yokuvuselela izimvume zokusebenza zabangaphandle;nokho, ezinye izindaba azikaxazululwa ngokugcwele.
Njengoba kungazange kube nokubuyekezwa kwenqubomgomo yokuvuselelwa kwezimvume zokuhlala, abantu bangaphandle kusadingeka babe khona eShayina futhi banikeze amarekhodi abo okungena ukuze bavuselele izimvume zabo zokuhlala.Eqinisweni, inqwaba yabantu bakwamanye amazwe izimvume zabo zokusebenza zavuselelwa kodwa kwadingeka bavumele izimvume zabo zokuhlala ziphelelwe yisikhathi.
Izinto zingase zibe nzima kakhulu ngemva kwezinyanga eziyi-12 lapho imvume yokusebenza idinga ukuvuselelwa futhi.Njengoba namanje alukho ushintsho emithethweni emayelana nokuvuselelwa kwezimvume zokuhlala, labo abangakwazi ukuvuselela izimvume zabo zokuhlala ngonyaka odlule, bangase bangakwazi ukuvuselela izimvume zabo zokuhlala nakulo nyaka.
Nokho, ngenxa yokuthi imvume yokuhlala esebenzayo ingenye yezidingo eziyinhloko zokuvuselelwa kwemvume yokusebenza, ngaphandle kwemvume yokuhlala esemthethweni, abafuduki abavaleleke ngaphandle kwaseShayina bangase bangakwazi ukuvuselela izimvume zabo zokusebenza.
Ngemva kokuqinisekisa kwethu nabasebenzi basehhovisi lezindaba zangaphandle e-Shenzhen, kunezixazululo ezithile: abantu abavela kwamanye amazwe bangacela abaqashi babo baseShayina ukuthi bakhansele imvume yabo yokusebenza noma bangavele bavumele imvume yokusebenza ukuthi iphelelwe yisikhathi.Bese kuthi uma sekuyisikhathi sokubuyela eShayina, abafake izicelo bangaphinda bafake isicelo semvume yokusebenza njengesicelo sabo sokuqala.
Kulokhu, siphakamisa ukuthi benze amalungiselelo alandelayo kusenesikhathi:
Faka isicelo serekhodi elisha elingelona ubugebengu futhi uthole ukuthi laziswa ngaphambi kokuthi uhlele ukuza e-China.
Qiniseka ukuthi uyawuthola umuthi wokugomela i-COVID-19 ukuze uvikele impilo yakho.
Landelela izinqubomgomo zakamuva ezikhishwe kuwebhusayithi yenxusa lase-China ezweni lakini - ngezinye izikhathi amanxusa ahlukene ezweni elifanayo angase angavumelaniswa ekubuyekezweni kwenqubomgomo, qiniseka ukuthi uwahlola kanye kanye.
Isikhathi sokuthumela: Sep-26-2021